Ngwa Android iji kwụsị egwu ma tinye ngwaọrụ ụra | Akụkọ akụrụngwa
You nwetụla mgbe ị gbalịrị itinye gam akporo gị ụra? Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ya, ọ bụ naanị n'ihi na enweghị ụdị ngwaọrụ ma ọ bụ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ a. Luckily e nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke-atọ ndị ọzọ ngwa mmepe ndị mere nnọọ akpali amụma, gụnyere onye ga-ekwe ka anyị na-etinye anyị gam akporo mobile ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-ehi ụra.
Ngwa anyị ga - eji maka ugbua nwere aha ụra oge, dika ọ dakọtara na ekwentị mkpanaaka na mbadamba, ọ bụrụhaala na ha nwere sistemụ arụmọrụ dabere na gam akporo. Ugbu a, ngwá ọrụ n'onwe ya na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ aghụghọ anyị nwere ike ịnabata mgbe ọ bịara automate "tinye n'ụra" nke ekwentị anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị bụ otu n’ime ndị hapụrụ ya gere egwu a nọrọ na ya.
1 Sra ma gbanyụọ egwu na ngwaọrụ gam akporo anyị
2 Isetịpụ Oge ụra na ekwentị mkpanaaka anyị
Sra ma gbanyụọ egwu na ngwaọrụ gam akporo anyị
Mgbe anyị kwuburu na ngwa a a na-akpọ Oge ụra ga-enye anyị ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị mgbe ejiri ụzọ aghụghọ ole na ole mee ya n'ụzọ ziri ezi, anyị na-anwa n'ụzọ pụtara ìhè ịrụ ọrụ a nke anyị tinyela n'isi akụkọ gara aga; Nke a pụtara na ọ bụrụ na oge ụfọdụ anyị ahapụ ekwentị mkpanaaka anyị na-akpọ egwu site na ụfọdụ ụdị ndepụta, ngwa gam akporo ị ga-enwe ohere ime ka ọ kwụsịotu mgbe ngụ oge ruru na njedebe ikpeazụ ya. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe kpatara anyị ga-eji mee nke a, azịza ya kachasị dabere na ịchekwa batrị nke ịkwesịrị ịkwado ka ọ ghara ihapu n'abalị ka ngwaọrụ mkpanaka na-akpọ ụdị egwu.
Oge ụra bụ ngwa na ị nwere ike iji kpamkpam n'efu, ọ bụ ezie na ị ga-atachi obi mgbasa ozi dị iche iche ewepụtara na interface ya; Ọ bụrụ n ’achọghị ka ewetara ha, mgbe ahụ ị ga-enweta ikike akwụrụ ụgwọ. Ọ dịkwa mma ikwu nke ahụ maka ụfọdụ ihe kpatara ya onye nrụpụta amachibidoro iji ngwá ọrụ a na mpaghara ụfọdụ nke uwa, inwe ike ime ya ibudata ngwa site na usoro ozo ozo.
Ozugbo iwere echiche ndị a n'ozuzu na mgbe ị wụnye ngwa ahụ, ị ​​ga-etinyerịrị nhazi ya.
Isetịpụ Oge ụra na ekwentị mkpanaaka anyị
Site na ndabara, a gam akporo ngwa ga-enyere anyị aka karịa oge nke oge 100, ihe anyị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịge egwu maka ogologo oge karịa ka edobere na nhazi a.
Ozugbo anyị kọwapụtara oge kachasị elu (nke nwere ike ịbụ elekere 2 ma ọ bụ karịa) na nhazi oge ụra, anyị ga-emetụ bọtịnụ ahụ kwuru "Bido", nke ngụda ga-amalite ozugbo. Ihe na-adọrọ mmasị karịa bụ na onye na-eji ekwentị mkpanaaka a eme ihe nwere ike itinye ụfọdụ egwu iji gee ntị mgbe ọ na-ehi ụra. Mgbe ngụda oge gwụchara, Oge Ihi ụra ga-akwụsị ịkpọ egwu ndị a na nke mbụ (nkeji ole na ole gara aga) ma emesịa, tinye ngwaọrụ mkpanaka ụra ma ọ bụ gbanyụọ.
Na mgbakwunye na ịme ihe ndị a, Oge Ihi ụra nwekwara ohere nke gbanyụọ ma modul Bluetooth na njikọ Wi-Fi Nke ngwaọrụ. Nke a bụ uru ọzọ dị ukwuu anyị nwere ike ịbịa napụta site na ngwa ọrụ ahụ, n'ihi na ịghara ịntanetị na-arụ ọrụ n'ihi mmebi iwu a, ọkwa ọkwa ndị ahụ (ma ọ bụ ịma jijiji) nke na-adịkarị mgbe email rutere, agaghị apụta, na-apụ ka anyi zuru ike maka ihe foduru abali nile.
Ihi ụra na-agbanyụ ma Bluetooth na Wi-Fi ka chekwaa batrị ka o kwere mee dị ka anyị tụrụ aro na mbido. Obi abụọ adịghị ya, ngwa gam akporo a bụ ihe magburu onwe ya, ọkachasị maka ndị na-achọ ịmalite ihi ụra mgbe ha na-ege egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu esi etinye ngwaọrụ gam akporo anyị ịrahụ ụra oge ụra